प्रचण्डका पछि, गए अरे सती ! | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, जेष्ठ २३, २०७८ मा प्रकाशित
ए झुम्री ! उभिण्डेको कान्छो र भिरघरे आईपुग्न लागे चाय बना त ! केटाहरु मिठो गफ गर्छन् । हैन राजनीतिको पनि विश्लेषण राम्रै गर्छ । तर, एउटा कुरो चैं मुन पर्दैन । हाम्रो गौरवशाली पार्टी र त्यही पार्टीका अध्यक्ष राष्ट्रनायक प्रचण्डलाई नेता नै होइन जसरी खसालेर बोलेको चैं पटक्कै मुन पर्दैन ।
हौ काका ! नमस्कार है ! के चाहिँ मुन पर्दैन भन्यौ हौ काका ! तिमीलाई प्रचण्ड बाहेक अरु प्रधानमन्त्री भएको मुन पर्दैन, आफ्नो पार्टी बाहेकका कार्यकर्ता मुन पर्दैन। काकालाई रुवावासी डाँडोले चैं जे निर्णय गरे पनि मुनपर्छ।
के रुवाबासी डाँडो भनेर खसालेर बोल्छस् भिरघरे ! ‘पेरिस डाँडो’ भनेर भन्न सक्तैनस् ? तेरो छ नि देउवाको दरवार ! बुढानिलकण्ठमा, हाम्रो त यस्तै भए पनि सप्पै निर्णय त्यही डाँडाबाट हुन्छ । अब यो हप्ता भित्र हाम्रो पार्टीमा एमाले खर्लप्पै उप्काएर माधव, रावल र झाक्री काम्रेडहरु आउँदै छन् । हाम्रो त कार्यालय नै सानो होला जस्तो छ ।
हो नि काका ! अब त्यो रुवाबासी डाँडोको कार्यालय धेरै सानो हुन्छ । चुनावपछि मात्रै त्यो डाँडो सुनसान हुन्छ । त्यसपछि बचेखुचेका कार्यकर्तालाई त्यो ठिक्कको हुन्छ । कि कसो कान्छा ?
त्यति सारो चैं होइन हौ भिरघरे दाई ! हाम्रो माधव काम्रेडहर्ले पार्टी खोलेर एक्लै बस्ने कि, प्रचण्डसंग एकीकरण गर्ने कि अथवा माओवादीमा विलय हुने भनेर निर्णय गर्न बाँकी नै छ । काकाले भने जस्तै एमाले गुटुङटुङ गयो भने त कार्यालय सानै हुन्छ ।
छाड केटा हो यस्तो कुरा ! बरु काठमाडौंमा राजनीति के हुँदैछ ? हाम्रो राष्ट्रनायक काम्रेड के भन्दै छन् ? अब आज अदालतले फैसला गर्छ कि गर्दैन ? अनि माधव नेपालहरु के हरेर बसेका हुन् । लु यो प्रश्नको उत्तर चैं उभिण्डेको कान्छाले दे त !
हौ काका ! ओलीले हाम्रो पार्टी एमाले कब्जा गरी हाले । सूर्य चिह्न र जबज पनि उनकै भयो । हामीलाई पनि कारवाही गरी हाले, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा पनि हाम्रो ४० प्रतिशत पुगेन । सबै ओलीको पक्षमा लागे । नयाँ पार्टी गठन गर्दा पनि बामदेवको हविगत हुने हो कि बडो दोधारमा छौं हामी त ! प्रचण्डको खासै पार्टी सङ्गठन छैन । अनि हामी पनि त्यही मिसिने हो भने ‘सर्पको घरमा सर्प पाउना, जिब्रो झिकाझिक’ मात्र होला !
कान्छाको कुरो ठिकै हो काका । अब ओलीले एक धक्का दिएपछि माधव नेपाल ‘भिरको चिण्डो’ बन्न पुग्छन् । झलनाथसंग जनता र कार्यकर्ता छैनन् । भिम रावल विचरा नेता हुन खोज्छन् । बोल्दाबोल्दै चिप्लिन्छन् प्रचण्डको त परिक्षण भै सकेकै छ । उस्तै उस्ता मिल्छन् बस्छन् ।
लौ चाय खाँदै गफ गर ! जति जे गरे पनि तिमार्का नेताहर्ले ओलीलाई हटाउन पनि सक्तैनन्, एमाले र जनता आफ्नो बनाउन पनि सक्तैनन् । अन्तिममा सप्पै नेता बाबुराम बन्छन् । चुनापमा बामदेवको नियती भोग्छन् । झलनाथ, माधव, प्रचण्डको काम छैन ।
यो झुम्री पनि बढी बोल्छे । जहिले पनि ओलीको पक्ष लिएर बोल्छे । अनि हाम्रो पार्टीको राष्ट्रनायकलाई खसालेर, हेपेर कुरा गर्छे । अब हाम्रो काम्रेडले एमाले भत्काई सकेका छन् । घनश्याम, योगेश, गोकर्ण, सुरेन्द्रहर्ले धोका दिन्छन् कि भन्ने डरले माधवहर्ले निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
निर्णय गरे पनि केही नापिदैन काका ! एमालेलाई मनपराउने कार्यकर्ता जबजको पक्षमा छन् । सूर्यमा भोटहाल्ने जनताले एमालेलाई राम्रै समर्थन गर्छन् । माधव नेपाले भनेजस्तो तेस्रो तहको नेता र जनता उनका पक्षमा छैनन् । बरु दोस्रो तहका केही नेता भने ओलीले मन्त्री नदिएको झोंकमा माधवको कन्दनी समाउन पुगेका छन् । बादल, टोपबहादुर, प्रभु साहहर्लाई समाल्न नसक्नेहरुले भीम रावलहर्लाई समाल्छु र मुसार्छु भन्नु पनि वाइयात कुरा हो । अहिले माधवहरु भद्रो हेरेर बसेका छन् ।
आ भिरघरे ! अदालतले संसद ब्यूताई दिएपछि ओलीको सरकार ढल्छ । अनि थाहा हुन्छ कस्को पक्षमा कति छन् भनेर । बरु तेरो देउवा मानेनन् भने हाम्रो प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पड्काउछन् ।
हो भनौं भने नहुने कुरा कसरी हो भन्नु, होइन भनौं भने तिमी रिसाउँछौ । हाम्रो देउवा दाइको पक्षमा अब सांसद संख्या झन् पुग्दैन । ओलीले ठिक्क मिलाएर देउवालाई नपुग्ने बनाई दिन्छन् । तिमारुले रायमाझी, प्रभु साह, भट्टहर्लाई निकाले जस्तै माधव हर्लाई निकाल्छन् । तिमी पनि आँधो कुरो गर्छौ । महन्थहरुसंग २० जना संसद छन्, यता माधवहरु निस्कासन अनि कताबाट पुग्छ हाम्रो दाइको बहुमत ! फेरि पनि चुनाव !
हामी माने पो चुनाप ! नमानेपछि केको चुनाप ! जान्ने पल्टेर कुरो नगर ! बरु भन्त कान्छा अब के हुन्छ ?
के भनु हौ काका ! हामीलाई संसद ब्यूतिए पनि निकाली हाले । पैला जानिएन, प्रचण्डको भनाई पत्याउने हुँदा अहिले पुरपुरेमा हात राखेर बस्नु परेको छ ।
तँ पनि उल्टो कुरो गर्छस् । यो राष्ट्र ओलीको मात्र हो र ! चुनाप भयो भने पनि हाम्रै पार्टी सबै भन्दा ठूलो बन्छ ।
लौ तिम्रै पार्टी ठूलो बनोस् सिट चैं जिरो बन्छ । हामी लागौं कान्छा अब । लौ काका !